OROMOOF DHIMMUU HOJIIN MUL’ISUU BARBAACHISA. -
By Falmataa | March 16, 2018
Qixxeessaa Lammii | Bitootessa 16, 2018
Dhiima Oromoo irratti qaamotni dubbatan akka banjiin tibba Badheessaa koosii keessaa dayya’ee ol yaa’utti bakka jiran maraa daa’itiilee sab-himaalee gara garaa keessaan baay’inaan mumul’achuun hojii yeroo ammaa ta’ee jira. Keessumaa erga WBOn zoonii kibbaa Agaazii irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee firaa fi diinni Oromoo bakka maraa gadi bahee wacuun sadarkaa gurraa fi ija nama hifachiisu irra gahee jira. Kan nama dhibu miidiyaan warra dhimma itti bahuu beekan biratti meeshaa beekkomsa, kabajaa, jaalala, guddinaa fi hamilee irratti wal horachiisan ta’ee dhimma itti bahama.
ummata guddinaan sadarkaa sana irra hin gahin biratti garuu meeshaa salphina, kufaatii, walaalummaa, diinummaa kkf irratti wal irraa horatan ta’ee dhimma itti bahama. Meeshaa irratti wal barsiisan irratti walaalummaa facaasuun ykn babal’isuun waan hin malle. Hawaasa addunyaa baay’ee guddatee fagaate hordofuuf tattaafachuun dhiifamee guddina irraa wal ittisuu fi gara duubaatti wal deebisuuf wal irratti olola hamilee wal cabsuu facaasuun gaarii miti. Sammuu bilisaan yaaduun guddina bira nama geessa. Oromoon har’a sammuun hin bilisoomin yoo jiraate asii achuu bilisoomuuf hin jiraatu. Yeroo daa’iman qe’erraa fagaachuu hin gahin ABO, WBO, Qerroo jedhanii haasawa itti hiikkatan kana keessa ABO, WBO, Qerroo Oromoon abaaru jiraachuu hin malle. Tarkaanfii diina irratti fudhachuu WBO kan jibbu wayaanee qofa. Tarkaanfin fudhatamee fi fudhatamuu baateefis Oromoo bayyattuu fixaa jiru. Oromoo dhumaatii harka nama akka isaan irra geeffamu irraa hambisuu kan danda’amu mootummaa kana garagalchuu qofa. Hamma mootummaan Tigreen hoogganamu kun hin buqqa’initti du’aatiin dhala Oromoo irraa ni dhaabbatti jedhanii yaaduun fayyaalummaadha.
Haasawa bilchaataa ummata Oromoo gara qabsoo hidhatnootti harkisu miidiyaalee irratti dubbachuu dhiisanii namootni afaan Tigree keessaa haasawa Tigree haasawan dhuguma Oromoo yoo ta’an olola itti jiran kana irraa ni dhaabbatu. Kan Oromoo hin ta’in maaf Oromoof hin dhimmin jedhanii komachuun hin barbaachisu. Kan dhimmeef firoomfachuu, kan cal’ise irraa cal’isuu fi kan itti duule of irraa ittisuun dirqama ilma sabaa irra jiru. miidiyaalee irratti yaa’anii tarkaanfii diina irratti dhihoo kana fudhatamee fi Oromoota wayyaaneen fixxe walitti fidanii walitti hidhuudhaan maqaa ABO balleessuuf Oromoon ala kanaa wacabbaran badii mataa isaanii irratti dalagaa akka jiran waan hubatan hin fakkaatan. Kun diina waliin of irratti duuluu akka ta’e beekuu malan.
Jijjirama mul’atu kamuu keessa waa heddutu dhufa. Yeroo QBOn bilisummaa ABOn hoogganamtu rarraga bilisummaa fi walabummaa irra geette kosii diiggaattiin darbachuun dhala Oromoo irraa waan eeggamuu miti. Hoogganoota, miseensota fi deeggartoota dhaaba kanaa jibbuudhaan qabsoo sabichaa jibbittu of geessuun doofummaadha. Jibbansa dhuunfaa gara jibbansa walootti geeddaruuf yaaluun waanjoo gabrummaa jalatti ummata keenya hambsuuf qooda gumaachuu akka ta’e beekuu barbaachisa. Kan jaalatee fi kan jibbes QBO ABOn durfamtu irraa waa odeessuu dhiisee ummata Oromoof dhuguma ni dhimma yoo ta’e hojiin gadi ba’ee lafa irratti waa mul’isuu qaba. Furtuu waa hundaatuu hojii ta’uu beekuu barbaachisa. Afaan banuu, arrabba dheeressuu, ija diimessuu fi boohuu fi hidhii xuxxuuxuu irraa jijjiramni dhufu hin jiru. Diina saba fixu of irraa fixuu malee falli furaan gara biraa akka hin jirre beekuun barbaachisaadha.
Qabsoo Haqaatti Jirra, Ni Injifanna!
← SBO Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 16, 2018 Waraanaan Uummata Ukkaamseen Bara-Baraaf Haangorra Jiraadhaan Wayyaanee Habjuu Hin Milkoofne! →